Dawo lagu daweynayo corona virus ee Dexamethasone – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Dawo lagu daweynayo corona virus ee Dexamethasone
Ururka Caafimaadka Adduunku wuxuu tixgeliyey guusha cilmibaarayaasha Ingiriiska ee daaweynta cudurrada halista ah ee fayraska corona ee soo ifbaxay dawada “Dexamethasone”, oo ay iska leeyihiin qoyska “steroids“, waa guul saynis ah, laakiin maxaan ka ognahay daaweyntaan, iyo waa maxay waxyeelada ay leedahay?
Agaasimaha guud ee ururka, Tiedros Adhanom, ayaa Talaadadii sheegay in “steroid” ay tahay daaweyntii ugu horreysay ee la xaqiijiyay oo yareynaysa dhimashada ka dhex jirta bukaannada Corona, kuwaas oo ku neefsada olol oksijiin ah ama kuwa wax gumaada.
Raiisel Wasaaraha Ingiriiska, Boris Johnson, ayaa Talaadadii xaqiijiyay in saynisyahano Ingriis ah ay adeegsadeen daaweyn muujisay natiijooyin wax ku ool ah wajiga Virus-ka Corona, isaga oo tilmaamay in daaweynta la isweydiinayo ay si dhakhso ah uga heli doonto Hay’adda Adeegyada Caafimaadka iyo tiro ku filan haddii ay dhacdo in mar labaad uu fayraska ka dillaaco.
Waa maxay Dexamethasone?
Dexamethasone waxay ka tirsan tahay qoyska steroids, oo loo isticmaalo yareynta caabuqa Waxaa loo isticmaali jiray daaweynta neefta iyo arthritis-ka sanadihii 1960-yadii.
Dexamethasone waxay ka joojisaa nidaamka difaaca inuu burburiyo taatikada dadka qaba xanuunnada dhiiga iyo dhibaatooyinka.
Dexamethasone ayaa sidoo kale loo qoondeeyay in lagu yareeyo burooyinka, gaar ahaan kuwa ku dhaca maskaxda, sida laga soo xigtay majaladda Sky Sky ee Ingiriiska.
Dexamethasone iyo Corona
Daraasad lagu muujiyey waxtarka “dexamethasone” ee fayraska corona soo ifbaxaya, 2,104 bukaan ayaa la siiyay 6 mg oo daawo ah hal mar bishii si loogu isticmaalo daweyn afka ah, ama mudis mudo 10 maalmood ah ah.
Baarayaasha waxay isbarbar dhig ku sameeyeen natiijooyinka iyagoo indha indheeya doorsoomayaasha maaddada daaweynta iyo inta kale ee muunadda baaritaanka, oo ka koobneyd 4321 bukaan.
Saynisyahannada ayaa ogaaday in muddo ka badan 28 maalmood, heerka dhimashada bukaannada u baahda hawo-mareenka ay noqdaan 41 boqolkiiba, kuwa ubaahanna oksijiinta waxay ahayd qiyaastii 25 boqolkiiba.
Heerka dhimashada ee bukaannada aan u baahnayn kaalmaynta nidaamkooda neefsashada waxay ahayd 13 boqolkiiba.
Qiimaha iyo waxyeelada keeni karto dawadu
Dexamethasone waa daawo raqiis ah Baarayaasha waxay qiyaaseen qiimaha koorsada daaweynta sideed qof oo qaba COFED-19 oo 40 rodol ah, qiyaastii $ 50.
Marka laga yimaado waxyeelooyinka daroogada, kuwa ugu caansan, kuwaas oo sida laga soo xigtay Machadka Caafimaadka Qaranka ee Ingiriiska iyo Tayada Daryeelka, ay yihiin shucuur walaac, garasho laxaad la’aan, dareen dheelitirnaan iyo daal, xasaasiyad dareere, madax xanuun, dhiig karka, isbeddelada niyadda, lallabbo, osteoporosis, calool xanuun, culeys xagga jirka ah iyo hurdo xumo.
Dhibaatooyinka aan caadiga ahayn waxaa ka mid ah cuntada oo kordha, dhibaatooyinka aragga, wadnaha iyo dawakhaad, iyo dhakhaatiirtu waxay kula talinayaan kuwa qaata “steroids” inay ka fogaadaan isku-darka bukaannada qaba jadeecada iyo busbuska.
Sida ku xusan tilmaamaha Machadka Caafimaadka Qaranka ee Caafimaadka iyo Tayada Daryeelka, qiyaasta sare ee “steroids” ayaa laga yaabaa inay yeeshaan saameynta hurdo la’aanta, niyadda xun, dabeecadaha xunxun, iyo fikradaha taban sida damaca dilka.